मोदी–साहको उदयसँगै आडवाणी कालको अन्त्य !
केशरमणि कटुवाल शनिबार, ९ चैत २०७५
भारतमा आगामी अप्रिल ११ देखि १९ मेसम्म तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचन सुरु हुँदैछ । ७ चरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनले आगामी ५ वर्ष भारतको नेतृत्व कसले प्रदान गर्नेछ भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ ।
यो निर्वाचनका लागि विभिन्न पार्टीहरुले एक्लाएक्लै तथा गठबन्धन बनाएर उम्मेदवार घोषणा गरिरहेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा एकल बहुमत पु¥याएको भारतीय जनता पार्टीको सिट घट्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
भारतको सत्ता राजनीतिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको उत्तर प्रदेशमा भाजपाविरुद्ध अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी र मायावतीको बहुजन समाज पार्टीबीच गठबन्धन बनेको छ ।
सन् २०१७ को विधानसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाउन सफल भएपनि अब त्यहाँको राजनीतिमा लामो समय पकड जमाएका दुई पार्टीबीचको गठबन्धनले भाजपालाई यसपटक सो राज्यमा चुनाव जित्नु फलामको च्युरा बन्ने विपक्षीको आंकलन छ ।
निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा भाजपाले बिहीबार राति १८४ सिटमा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरेको छ । यो पहिलो सूचीअनुृसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः वाराणसीबाट चुनाव लड्नेछन् । भने भाजपाका अध्यक्ष अमित साह गान्धीनगरबाट चुनावी मैदानमा उत्रिनेछन् ।
गान्धीनगर भाजपाका वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणीको चुनाव क्षेत्र हो । जुन क्षेत्रमा उनले सन् १९९८ देखि निरन्तर चुनाव जित्दै आएका थिए । यो पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुका बाबजुद उनले गान्धीनगरबाट चुनाव लड्ने मौका पाएनन् ।
आडवाणीलाई यस पटक आफ्नो पुरानो क्षेत्रबाट चुनाव लड्न नदिनुले भारतीय जनता पार्टीभित्र हुँदै गएको परिवर्तनलाई देखाउँछ । एक शब्दमा भन्दा यो प्राकृतिक संक्रमणको अवस्था हो । आडवाणी आफैं पहिलेजस्तो सक्रिय रुपमा चुनावी प्रचार प्रसार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
चुनाव जित्नका लागि निरन्तर खट्न उनको उमेर र स्वास्थ्यले पनि साथ नदिने भएकाले गान्धीनगरजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा अमित साहलाई उम्मेदवार बनाएको भारतीय विश्लेषकहरुको तर्क छ । तर, आडवाणी भाजपाको राजनीतिबाट ओझेल पर्ने र भाजपाको नेतृत्व दोस्रो पुस्ताको काँधमा जाने आँकलन यसबाट गरिएको छ ।
आडवाणी र साहको तुलना
लालकृष्ण आडवाणीको सिटमा अमित साह चुनावी मैदानमा उत्रिदै छन् । यसलाई लिएर कतिपयले अमित साहको व्यक्तित्वलाई आडवाणीसँग तुलना पनि गरेका छन् । तर कुनै सिटबाट लड्दैमा कसैको कद ठूलो वा सानो भइहाल्ने चाँहि होइन ।
वाराणसीबाट मोदीलाई चुन्नुको अर्थ यो सिट ठूलो भयो भन्ने होइन । यो नेताको आफ्नो व्यक्तित्वमा निर्भर रहन्छ । सिटको नेताको कदसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन । गान्धी नगरबाट अमित साहले चुनाव लड्नुका पछि उनी भाजपाको अध्यक्ष हुनु पनि हो । तर गान्धीनगरबाट नै चुनाव लडेका कारण साहको कद आडवाणीको जस्तो हो भन्नु गलत हो ।
आडवाणी र अमित साह दुवै अलग छन् । आडवाणीको कद साहकोभन्दा ठूलो छ । साहलाई आडवाणीको स्थानमा पुग्न अझै धेरै समय लाग्नेछ । तर भाजपामा यसलाई आडवाणी युगको अन्त्यकै रुपमा हेरिएको छ, नेतृत्वका तौरतरिकामा फरक आएको छ ।
सन् २००९ को निर्वाचनबाट नै पुरानो युगका नेताको जमाना गएको करिब करिब स्पष्ट भएको थियो । अमित साहलाई गान्धीनगरबाट चुनाव लडाउने फैसलालाई लिएर अर्को तर्क पनि गरिएको छ । उनी मोदी सरकारलाई दोस्रो पटक सरकारमा ल्याउने बाचासहित उनलाई मैदान दिइएको हो ।
यस्तो अवस्थामा उनी आफैं मोदीको सरकारका महत्वपूर्ण सदस्य बन्न सक्छन् । यद्यपि कसैलाई क्याबिनेटमा लैजाने कुरा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारभित्र पर्छ । सन् २०१९ को निर्वाचनमा भाजपा उनकै अध्यक्षतामा भइरहेकाले पनि उनको भूमिका अहम हुनेछ । एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित मिति: शनिबार, ९ चैत २०७५
पाकिस्तान एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना
भारतमा जेठ १८ सम्म थपियाे लकडाउन
कोरोना अपडेट : विश्वभर २ लाख ९८ हजारको मृत्यु, ४४ लाख ३० हजार नाघे संक्रमित
मर्निङ वाकमा निस्किएका नेपालका लागि पूर्वबेलायती राजदूत बुधबारदेखि बेपत्ता
कोरोनाको उपचारमा खटिएका रसियाका ३ चिकित्सक अस्पतालको झ्यालबाट हामफाले
दिल्ली सरकारले लगायाे रक्सीमा ७० प्रतिशत काेराेना शुल्क
लिभरपुल एभर्टनसँग रोकियो, चेल्सी अंक दुरी घटाउँदै
बार्सा–रियलः एल क्लासिको रेकर्डमा को बलियो ?
क-कसले खाए जनअपेक्षा पूरा नगर्दा चड्कन !
ओपेरामा झरेको प्रचण्डको आँसु र विप्लवमाथि प्रतिबन्ध
यसकारण तत्काल आउँदैन चिनियाँ रेल
शिक्षा क्षेत्रमा असुरक्षा र अस्तव्यस्तता : सिंंह
विप्लव नेकपाभित्र 'भूकम्प'को खतरा !
दस वर्षमै कसरी काँचुली फेर्‍याे नाम्जेले ?